Vhoriyamu Pcb Assembly - Shenzhen KAISHENG pcb CO., LTD
PCBFuture inonyanya kugadzirisa yakaderera vhoriyamu pcb musangano masevhisi uye epakati Vhoriyamu gungano masevhisi neakagadziriswa basa. Isu takashongedzerwa nezvigadzirwa zvemberi zvekugadzira zvepasi-kusvika-pakati vhoriyamu tsika pcb gungano. Uye isu tine akawanda magungano mitsara iyo inogona nyore kugadzirisa uye kugadzirisa maererano nemagetsi zvigadzirwa zvigadzirwa uye zvakatemwa mune ipfupi nguva.
Isu tinotarisira iro rese gungano rePCB kubva kuPBB yekugadzira, zvigadzirwa zvekutengesa, gungano reSMT, kuburikidza negungano regomba, kuyedzwa uye kuendesa. Kuva anotungamira emagetsi gungano mugadziri anopa vhoriyamu pcb musangano masevhisi, isu tinovimbisa kuti chigadzirwa chako hachina njodzi zvachose nemari yakaderera.
PcbFuture’s Kugona muVhoriyamu pcb Assembly
Isu tiri wedunhu bhodhi gungano nyanzvi mune iyo indasitiri inopa yakanyanya kuvimbika yakadhindwa wedunhu bhodhi musangano musangano. Nyanzvi vedu vane ruzivo uye vane mutoro vanobatsira PCBFuture kupa vatengi vedu magungano akanyanya kukodzera sezvaanotarisirwa kune avo chaiwo mafomu.
Dhizaini Yekuyedza (DFT)
Dhizaini yekugadzira (DFM)
• Gungano reBGA
• SMT inounganidza chikamu chekuisa kubva pa0402 kusvika pairi QQ
• RoHS inoenderana gungano
• Kuburikidza mugomba pcb gungano soldering
• Ruoko rwePCB soldering sevhisi
• Magungano ePBB asina Mutungamiriri
• Precision chinhu chinotungamira chinoumba
• Pasina kuchenesa pamwe nekushambidza mvura
Zvakanakira isu Vhoriyamu pcb Assembly:
• Ese edu asina kudhindwa wedunhu mabhodhi ari 100% bvunzo (E-bvunzo, Solderability bvunzo, FQC uye nezvimwewo).
• Ipai prototype PCB musangano webasa rekuyedza pasati pagadzirwa mashoma.
• Kutanga kugadzirwa kwemazhinji mushure mekushambadzira kwevatengi kuyedza kwese kana kupa kechipiri prototype PCB gungano kugadzirwa.
Kuitisa AOI kuongorora uye kuona kunoonekwa pane ese PCB musangano maitiro.
• Kushandisa X-ray kuongorora paBGA uye mamwe mapakeji akaomarara.
• kana paine zvabuda pagungano, mainjiniya edu ane ruzivo anogona kuzvigadzirisa vasati vatakura.
• Isu tine timu ine ruzivo rwekugadzirisa ese magungano uye tinotumira iwo maPCB emhando yepamusoro kwauri nenguva.
Isu tine chivimbo mukukupa iwe yakanakisa mubatanidzwa wekutendeuka-kiyi pcb musangano webasa, mhando, mutengo uye nguva yekuendesa mune yako Mudiki batch vhoriyamu pcb gungano odha uye Mid batch mangamu Vhoriyamu pcb gungano odha.
Kana iwe uchitsvaga yakakodzera PcB gungano gadzira, ndapota tumira yako BOM mafaera uye pcb mafaira ku sales@pcbfuture.com . Ese mafaera ako akavanzika zvakanyanya. Isu tinokutumira iwe chakakodzera chitaurwa nenguva yekutungamira mumaawa makumi mana nemasere.